Akụkọ - Ihe okike okike nke uwe akwa akwa
A pụkwara ikwu na nwughari akwa bụ ụdị nke abụọ nke akwa akwa. Ọ na-ezo aka na nke abụọ nhazi nke okokụre akwa dị ka imewe kwesịrị na-emepụta ọhụrụ nka mmetụta. Ọ bụ ndọtị nke mmebe echiche na nwere enweghị atụ ọhụrụ. Ọ na - eme ka ọrụ onye mmebe pụọ iche.
Hodszọ nke uwe akwa nwughari
Methodszọ ndị a na-ejikarị eme ihe bụ: ịkwa ákwà, piling, pleating, concave and convex, hollow-out, printing embroidery, wdg.
Ihe eji eme okike, nke nwere udiri ihe di iche, eriri, eriri, eriri, ihe nkpuchi, uzo ma obu ihe ndi ozo
Ichekwa, na-ekpuchi agba dị iche iche na textures.
A makwaara dị ka pleating, pleating nwere ike belata ma ọ bụ belata akụkụ ogologo na ogologo nke akwa uwe, na-eme ka uwe ahụ nwee ntụsara ahụ ma maa mma. Ka ọ dị ugbu a, ọ nwekwara ike inye egwu na drape ma hazie njirimara mara mma nke akwa ahụ, nke ọ bụghị naanị na-eme ka uwe ahụ nwee ntụsara ahụ ma dabara adaba, kamakwa ọ na-abawanye nsonaazụ ịchọ mma.
N'ihi na o nwere ihe arụ ọrụ na nke ịchọ mma, a na-ejikarị ya eme ihe na uwe ụmụ nwanyị na-agbasaghị agbachapụ, nke na-eme uwe ahụ ka ọ baa uru ma dị ndụ.
Ntughari, tinyere olulu, oghere ihe ntaneti, oghere ihe ntanet, ihe ntancha, wdg
Na ejiji ejiji, ịke, akwa na teknụzụ bụ ihe ndị dị mkpa, na akwa nke abụọ na-arụ ọrụ dị mkpa. Otu mpempe akwa dị mma na ahụ, ọdịdị na-enweghị atụ bụ ezigbo ejiji. Uwe eji emebe ihe nke abuo kwesiri ka o kwekorita n'echiche nke onye okike, n'ihi na o mechaala okara nke oru ejiji ejiji, o gha ewetakwara onye mmebe ahu ihe nkwalite na mmasi okike.